March 15, 2011 — naymin99 ကျွန်တော် ဒီနေ့တော့ Tune up utilities 2011 ကို Serial Keys လေးတွေနဲ့တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ Tune Up ဆိုတာကတော့ ကျွန်တော့တို့ကွန်ပျူတာ၇ဲ့ Windows Operation System ကိုပိုမိုမြန်ဆန်ပြီးတော့ ကောင်းမွန်လာအောင်ပြုလုပ်ပေးတဲ့ Untilities လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကွန်ပျူတာကို သွတ်သွတ်လေးသုံးချင်သူတွေအတွက်တော့အဆင်ပြေတာပေါ့ဗျာ………..ဒီကောင်လေး၇ဲ့အသုံးဝင်ပုံအသေးစိတ်ကိုတော့ ကိုဖြိုးငြိမ်းေ၇းသားထားတာလေးကိုပြန်၇ှယ်ပေး လိုက်ပါတယ်။ မူ၇င်းလင့်လေးကတော့ ဒီမှာ ပါ။အသုံးပြုချင်တဲ့သူတွေအတွက်တော့ကျွန်တော်အောက်မှာ ဒေါင်းလော့လင့်လေးပေးထားပါတယ်။ကျွန်တော် Serial Keys ထည့်နည်းကိုတော့အောက်မှာပုံလေးတွေနဲ့ပြထားပေးပါတယ်။
Category – increase performance၁။ Tuneup Drive Defrag
မလိုအပ်တဲ့ physical Memory ကို freeup , clear ,move ပြုလုပ်နိုင်တဲ့ module လေးပါ သူရဲ့ ထူးခြားချက် ကတော့ သူကို run လိုက်တာနဲ့notification area ပုံစံမျိုးနဲ့ ပြသနေမှာ ဖြစ်ပြီး ၊ window startup မှာ လဲ automatic load ပေးထားလို့လဲရပါတယ်….
ဒီ module လေးကတော့ User တိုင်းအတွက်မလိုအပ်ပါဘူး( ကျွန်တော်လဲ တစ်ခါမှ မသုံးဘူးသေးပါ..:P)Hibernation (hibernation n. A state in whichacomputer shuts down after saving everything in memory to the hard disk. When the computer is powered on, programs and documents that were open are restored to the desktop. See also standby. )ကို အသုံးပြုတဲ့ user များအတွက် သီးသန့် ဖြစ်ပါတယ်အဲ window messenger ကို မျက်စိ ရှုပ်နေသူများကတော့ ဒီမှာ အလွယ်တကူ removeလုပ်နိုင်ပါတယ်ဗျာ..
၁။ TuneUp Disk Doctorတော်တော် အသုံးဝင်တဲ့ module လေးပါDrives မှာရှိတဲ့ errors တွေကို ရှာဖွေပေးခြင်း၊ မှန်ကန်အောင် ပြုပြင် ပေးခြင်း တို့လုပ်ဆောင်ပါတယ် ကျွန်တော် ကွန်ပျုတာ စတင်အသုံးပြူခါစ က ကွန်ပျူတာ ကို ဟိုကလိ ဒီကလိ လုပ်လိုက်တာHarddisk E ကို ဖွင့်လိုက်တာနဲ့ shutdown ဖြစ်ဖြစ်သွားတာ Virus စစ်ကြည့်တော့ လဲမတွေ့ဘူး ဗျ အဲဒါနဲ့ ဒီ module လေးနဲ့ ဖြေရှင်းလိုက်မှ အဆင်ပြေသွားတော့တယ် ဗျာ ( ဒီ doctor က ခြေကြွခ မပေးရ ပေလို့ပဲ … )
Category- Additional tools ၁။TuneUp Processor Manager
၂။TuneUp Registry Editor ဒီ Editor လေးက တော့ registry ကို ပြောင်းလဲ တာတွေEnable, disblae လုပ်တာတွေ ကို ကူညီပါလိမ်မယ် Run commandကနေ regedit လို့ ခေါ်ပြီး သုံးတာနဲ့ အတူတူပါပဲ … ။
Serial Keys ထည့်နည်း အ၇င်ဆုံး Help & Support ထဲတွင် About ဆိုတာကို၇ှာပြီးနှိပ်လိုက်ပါ။အပေါ်ကပုံမှာပြထားသလိုမျိုး